Activities Plan » Computer University (Hpa-an)
Mathematics (Faculty of Computing)
Faculty of Computer System and Technologies
The Computer subjects_ Software, Hardware, Application, Information Science and Computational Mathematics are taught at the Computer University of Hpa-an.
Being given fresher welcome for newcomers by senior students.
Holding English essay and debate competitions and Myanmar essay and poem ones as the rememberance of the independence day in order to flourish the sense of union spirit.
Holding fun fair as the mark of the Union Day.
Holding Hta-ma –ne contests in order to get unity.
Holding football match at the university playground.
Rainy Season Tree Growing Ceremony
Putting the memorial wreath down at the monument and bow to it as the commemoration of the Martyr’s Day.
Offering robe to monks in the period of Waso.
Being held the ceremony of paying homage to teachers by the students.
The following associations and society are organized in the Computer University of Hpa-an.
Myanmar Computer Professional Association(MCPA),Hpa-an (started to organize in 2015)
Red Cross society (started to organize on 1st January, 2013)
Blood Donation Group (started to organize in 2010)
Scouts (started to organize in 2014)
Sport groups are also organized in the Computer University of Hpa-an. The matches of football, Sepak Takraw, Badminton, Htoke Sea Htoe and chess will be held for student.
There arealot of text books, thesis research papers and books for knowledge and pleasure in the library. Moreover, the computers connected with Internet are installed for students the relative subject easily.
The University will cooperate with other universities and institutes to promote education of Myanmar according to Higher Education Law.
Since ICT is essential for the knowledge era, the University will promote ICT in Kayin State.
The University will try to conduct research in ICT field.
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)တွင် သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသော ကွန်ပျူတာဘာသာရပ် များမှာ ပရိုဂရမ်နည်းပညာ(Software) ဘာသာရပ်များ ၊ စက်နည်းပညာ(Hardware) ဘာသာ ရပ်များ၊ အသုံးချနည်းပညာ (Application)ဘာသာရပ်များ၊ သုတသိပ္ပံ (Information Science) ဘာသာရပ်များနှင့် တွက်ချက်ရေးသင်္ချာ(Computational Mathematics) ဘာသာရပ် များဖြစ်ပါသည်။
စီနီယာကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများမှ မောင်မယ်သစ်လွင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများကို ကြိုဆိုပွဲပြုလုပ်ပေးခြင်း။
လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်၊ ပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ် အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ရှင်သန် ထက်မြက်ရေးအတွက် စာစီစာကုံးနှင့် ကဗျာပြိုင်ပွဲများ၊ အင်္ဂလိပ်စာကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲနှင့် Essay ပြိုင်ပွဲများ အားကစားပြိုင်ပွဲများကျင်းပခြင်း။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိစေရန် ထမင်းနဲထိုးပွဲကျင်းပခြင်း။
အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အာဇာနည်ကျောက်တိုင်တွင် လွမ်းသူပန်းခွေချခြင်း၊ အလေးပြုခြင်း။
ဝါတွင်းကာလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းများ ကပ်လှူပူဇော်ပွဲကျင်းပခြင်း။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှ ဆရာ၊ ဆရာမများအား အာစရိယပူဇော်ပွဲကျင်းပခြင်း။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအသင်းအဖွဲ့များအား ဖွဲ့စည်းထား ရှိပါသည်။
အားကစားဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ ၊ အားကစားအမျိုးအစားနှင့် ပွဲစဉ်များ
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)အနေဖြင့် အားကစားအသင်းများ ဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်ထား ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများအား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ၊ ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲများ၊ ထုပ်ဆီးတိုးပြိုင်ပွဲများ၊ ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲများ နှင့် စစ်တုရင် ပြိုင်ပွဲများကျင်းပပါသည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ဘားအံ)ရှိ ကျောင်းစာကြည်တိုက်တွင် ပြဌာန်းစာအုပ်များ၊ သုတ၊ ရသဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ သုတေသနနှင့်ဆိုင် စာတမ်းများကိုထားရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများ စာရှာဖွေရာ၌လွယ်ကူစေရန် Computerများအား Internet ချိတ်ဆက်၍ ထားရှိပါသည်။
(က) အသစ်ပြဌာန်းမည့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေအတိုင်း ပညာရေးမြှင့်တင်မှုများကို အခြားတက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
(ခ) သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (ICT)သည် ယနေ့ခေတ် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ မပါမဖြစ်ကဏ္ဍဖြစ်သောကြောင့် ပြည်နယ်အတွင်း ICT နည်းပညာစိတ်ဝင်စားမှု မြှင့်တင်လာရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်။
(ဂ) သုတေသနလုပ်ငန်းများ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းသွားမည်။
Copyright © 2016 University of Computer Studies (Hpa-an). All Rights Reserved.